Okulandelayo | Ungakuyeka Kanjani Ukungabaza Emsebenzini
We bahlole izinkulungwane zabaholi futhi enye yezinselelo eziphambili ezembuliwe yile:
Ungakuyeka kanjani ukungabaza emsebenzini.
Ijubane elimangazayo loshintsho kubuchwepheshe nakwibhizinisi lenza ukuthi kube nzima ukugcina abasebenzi behlanganyela ekwenzeni ikusasa.
Abasebenzi baphonswa inselelo ngoshintsho oluqhubekayo futhi ababethembi abaholi babo noma ukuqondisa kwebhizinisi. Izimo ezinjenge-cynicism, ukubhuqa kanye 'nalapha siyahamba futhi' ngabasebenzi kunganciphisa ukuguqulwa okungcono kakhulu kobuholi emizamweni yokushayela ushintsho.
Izizathu eziphezulu zokuthi kungani abasebenzi bengabazi yilezi:
Babone ukuthi izinhlelo ziyaqala bese belahlekelwa umusi ngakho-ke bayabekezela ezinhlakeni ezintsha
Babone abaholi bezama ukuthengisa ushintsho olukhulu ngaphandle kokubandakanya abasebenzi noma ukucela ukufaka.
Baye batshelwa ukuthi ubuchwepheshe obusha bazokwenza konke kube ngcono.
Ushintsho luphoqelelwa kubasebenzi ngaphandle kokugxila ekuzibandakanyeni kwabasebenzi ekuguqukeni ngakunye.
Kukhona isiko lokungathembi - abasebenzi bayangabaza ukuthi abaholi banezintshisakalo zabo nenqubekela phambili engqondweni.
Akugcinanga lapho kuqeqeshwa khona futhi kuqondiswa abasebenzi ukuze baphumelele ngoshintsho oluzayo.
Izisombululo zokungabaza emsebenzini zilele ebuholini, ziguqule ubuholi kanye nokwakha isiko lokuzibandakanya emsebenzini.
Kukhona ingxenye yezengqondo ukudlala ezindaweni zokusebenzela. Abantu bazophendula ngokuthi bafakwe, bacelwe okokufaka futhi bayabhekwa.
Ukukhohlisa nokungabaza kuyimikhiqizo yabantu abazizwa sengathi akekho onendaba.
Nazi izihluthulelo zokuthi ungamisa kanjani ukungabaza emsebenzini:
Tshala imali ekuthuthukiseni ubuholi obulungele ikusasa - siza abaholi ukuthi bangezele yena amakhono okufundisa nokufundisa ukuze babe nokuxhumana kwekhwalithi engcono namalungu eqembu labo.
Zibophezele kusiko lokusebenza elingaguquki - setha ukulindela ukuthi ukusebenza kuyavuzwa. Lokhu kusho ukubhekana nabasebenzi abangavumelani nalutho ngokulindela okucacile futhi baphendule kuye ngemiphumela yabo emaqenjini.
Have izingxoxo ezibalulekile kaninginingi ngokuxoxa okukodwa komqeqeshi. Khuluma nabantu abangabazi nakancane futhi uzimisele ukuphendula futhi usekele isisebenzi ngemibuzo nezinto ezimkhathazayo.
Shayela indlovu egumbini - umhlangano obanzi wenkampani ongabandakanya imihlangano ebonakalayo uyavuma ukuthi kunokungabaza nokuthi kufanele kulindelwe. Bese ulungisa ukuthi yini ezokwehluka kulokhu nokuthi kungani ushintsho luzonamathela.
Bamba iqhaza ku 'shintsha ubuholi' okusho ukuthi wabelana ngombono wokuthi uyaphi, uhlanganyele futhi uqoqe imininingwane evela kubasebenzi, wabelane ngemiphumela yedatha. Bandakanya abasebenzi ukusiza ukudala uhlelo lomsebenzi.
Abelana ngemibiko yenqubekela phambili njalo ngesonto. Yabelana nge-Intranet yakho, ngamavidiyo athunyelwe kubo bonke abasebenzi nge-imeyili, thumela ameshibhodi abonisa ukuthi ukudayela kuqhubekele kanjani ekufezeni izinjongo zokushintsha.
Guqula ama-skeptics akho e -aysayer abe abameli babaguquko. Cela ama-skeptics ukuthi akusize 'usakaze izwi' futhi uhlanganyele kulo ushintsho ngokulungeza kumaphrojekthi azoba inselelo futhi awakhuthaze.
Umbuzo okufanele uzibuze wona yilokhu: "Ngabe abasebenzi bethu banamalungelo onke okungaqiniseki ngomlando wethu ukuthi silwenzile kanjani ushintsho?"
Uma ungavuma ukuthi uyakuqonda ukuthi 'kungani' kunokungabaza ungenza ushintsho ekuwumiseni kumkhondo wawo. Ngezindlela eziningi, ukubaluleka kokuba nokungabaza ukuthi kungasenza sibheke ushintsho ngendlela yokuhlaziya kakhulu. Ama-skeptics anikela ngombono osiza abaholi ukuthola ukucaca futhi bagcizelele ubuhle balolo shintsho.